Polyester Cotton Poplin Fabric, Twill Shirt Fabric, Plain Poplin - Ruimian
65% Polyester 35% Kotoni Fabric
80% Polyester 20% Kotoni Fabric
90% Polyester 10% Kotoni Fabric
Shanda Pfeka Micheka Yunifomu Fabric
Isu tinokwanisa kugadzirisa dhiza rakasiyana rejira yemafuta, kubhuroka, kudhiza uye yakadhindwa machira ayo anogona kushandiswa pakuburitsa, kumonera, kupfekedza, nguo, shangu, bhutsu, mabhegi uye machira emumba, ext. Isu tinogonawo kupedzwa kumucheka uyu ne sanding (peach ganda). Mvura- chiratidzo, pre-shrinkage, murazvo-unodzosera, crease inodzivirira, pasi-chiratidzo.
Kuti ugadzire hunyanzvi uye kupfuurira kuita bhizimusi sesimba rekushandura, kugadzira bhizinesi rakasimba, capital capital, maneja manejimendi nekusimbisa simba semutsetse mukuru, nehupfumi hwakadzika hwebhabhoni, kuchengetedza zvakasvibirira zvakasvibirira uye nekushongedza kwakanaka sekutungamira, ita machira akasimba kudhinda uye kudhiza indasitiri huru.
Ruimian ine zvemukati uye kunyange yepamberi zvigadzirwa zvekugadzira; zvigadzirwa zvakawanda zvinotumirwa kuUnited States, Japan, Western Europe, South Korea, Australia, Hong Kong, Turkey nedzimwe nyika nematunhu.
T / C 65/35 poplin machira ejasi jira
Unhu hwakanaka polyester machira machira poplin machira
20% machira 80% polyester pocketing machira
10% machira 90% polyester dhiri rakarukwa
35% kotoni 65% polyester Chipatara yunifomu
Hebei Ruimian Co, Ltd Inogadzirwa nyanzvi uye inotengesa kunze kwenyika machira. Isu tinokwanisa kugadzirisa dhiza rakasiyana rejira yemafuta, kusanganisa, kudhiza uye yakadhindwa machira ayo anokwanisa kushandiswa pakuburitsa, kumhara, kupfekedza, nguo, shangu, bhutsu, mabhegi uye machira emumba, ext. Isu tinogonawo kupedzwa kumucheka uyu ne sanding (peach ganda). Mvura- chiratidzo, pre-shrinkage, murazvo-unodzosera, crease inodzivirira, pasi-chiratidzo.
35% kotoni 65% polyester pocketing machira
35% machira 65% polyester shirting machira, combed ...
20% machira 80% polyester shirting machira, combed ...
chii Twill mucheka?
Iyo warp uye weft yarns dzakabatanidzwa kamwechete, uye warp uye weft interlacing nzvimbo dzinowedzerwa kuti rishandure chimiro chemachira uye pamwe chete zvinonzi twill weave. Maumbirwo ejira maviri ...
Kune maviri matanho mune ino TPU yekurapa machira. Yekutanga ndeyekutanga machira. Mucheka usiri-wakarukwa. Iyo yepasi pasi TPU firimu. Inoita kuti mucheka uve wakasviba uye usina mvura. Iyo yakapfava uye inonamira TPU layer ...
Musi waApril 10, kambani yedu yakaenda kuVietnam kunotora chikamu mune zvekuratidzira, ichiratidza zvigadzirwa zvekambani yedu huru: jira muhomwe, Chigadzirwa chekurapa, machira ekushongedza, uye yakapa vatengi zvakadzama kuratidzwa kweavo ...